Yazisa iBrand yakho kwiiNkomfa ngeLaptop Skin | Martech Zone
Ukuqala kwam ukubona isikhumba esipholileyo kwiLaptop, ibiyiyo UJason Bean I-logo ye-bnpositive kulusu kwi-laptop yakhe. Iyamenza abonakale kulwandle lweelaptops kwaye iyaqapheleka kulo naliphi na igumbi lenkomfa.
Ndithathe isigqibo sokuyila ulusu lwam lweMacBookPro kwaye ndahamba ndaya kwiiwebhusayithi ezithile ngaphambi kokuba ndifumane enye ekulula ukuyisebenzisa kwaye yenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo. Indawo endithathe isigqibo ngayo Isikhumba. Isinxibelelanisi sokuyila ulusu sasilula ngokulula ukuyisebenzisa, kwaye unikezela ngenombolo yemodeli yelaptop yakho ukuze ibenobungakanani ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo malunga nelogo.
Umgangatho wolusu olukhokelwayo uyamangalisa… wona kwaye ungqindilili kwaye awunakumkrwela. Ndifumana intetho eninzi malunga nendlela ebukeka ngayo kwaye ndiyayithanda inyani yokuba inyusa uphawu lwam. Ilizwi lam lesilumkiso: qiniseka ukulayisha umfanekiso onesisombululo esiphakamileyo. Ulusu lwam luyi-pixelated encinci, kodwa isebenza kakuhle kuba ijongeka ngathi inobugcisa. Ndongeze igama lam le-twitter ukuze abantu bafumane kwaye bandilandele ngokukhawuleza.
Ndiyamangaliswa kukuba andiboni uninzi lweempawu eziphambili zibonelela ababekho kwinkomfa ngezikhumba zeelaptop. Kuya kuba mnandi kakhulu ukungena kwiholo yenkomfa yezobugcisa kwaye uchonge ngokukhawuleza uGoogle, uMicrosoft nabanye abasebenzi! Kulula kakhulu kunokuzama ukufunda igama lenkampani yabo kwibheji exhonywe entanyeni yabo!
tags: iibhlog izimvoukuhanjiswa kolawuloiithegi zentlokoiirobhothi.txturl
Ulwazi ngeWebhu eyi-2.0
Nov 20, 2009 kwi-3: 10 AM
Enkosi ngokukhankanywa kulusu lwam lweLaptop ukusuka kuMyTego.com. Ndiyavuma ngezimvo eziphakamileyo. Fumana esona sisombululo siphezulu somzobo wakho onokuwufumana. Ulungile nangokuma ngaphandle kwesihlwele, ngapha koko, uChris Brogan wandikhetha kwiBhlogINDIANA kulo nyaka uphelileyo ngesikhumba sam selaptop.
Novemba 20, 2009 ngo-12: 21 PM
Ukufumana indawo entsha yokubhengeza uphawu lwakho kufana nokufumana itshizi engaphezulu kwipitsa- uyakuhlala ufumana enye indawo yokuyifaka. Iposti enkulu.
Iimpawu eziPholileyo zaseBritane
Nov 23, 2009 kwi-4: 43 AM
Lo ngumbono omkhulu, Doug! Ndizakufumana ulusu olwenzelwe ilaptop yam 🙂
Nov 23, 2009 kwi-6: 07 AM
Enkosi Michael! Unophawu olukhulu (kwaye uyawathanda amakhadi amatsha!) -Ingqondo iyonke!
Meyi 14, 2012 kwi-1: 39 PM
Ndikhangele eyona nto inye eyenziwe ngokwezifiso zeLaptop yeLaptop, kodwa eIndiya, njengoko ulusu luza kundibiza kakhulu kuthumelo ukuba alukho kwimveliso ngokwayo, yiyo loo nto ndikhethe into ethile ekuhlaleni.
Sikhangele sakhangela saza safumana i theskinmantra.com kunye ne-inkfruit.com, ngelixa inkfruit ingazenzi konke konke, abafana be-theskinmantra bayenzile kwaye inkwenkwe eyahlukileyo ebolekwe kwilaptop iyamangalisa…
Akukho lungelelwaniso lucebileyo olwenziwe kwi-Intanethi njengolusu, kodwa sinokumane sithumele umfanekiso kubafana kwaye benza ulusu lwelaptop. Ayisiyiyo eyona inzima, kodwa yonke into iyaxolelwa emva kokuba ndifumene ilaptop….
cna ndithumela ikhonkco kwifoto yelaptop yam, wud love to flaunt 🙂 🙂
Meyi 14, 2012 kwi-4: 51 PM
Ewe kuya kufuneka wongeze umfanekiso ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo weSigqibo. Ndingathanda ukuyibona!
Agasti 22, 2012 ngo-10: 36 PM
Esinye sezizathu zokuba ndithande ulusu lwe-Skinit kukuba, ngelixa kuthatha izihlunu ezithile, azizukubakho nantsalela. Kuhle!